Mayelana NATHI - KELU SHARE LIMITED
KELU SHARE LIMITED kudliwe ngo-2003 futhi kutholakala eDongGuan Idolobha lasePearl River Delta lapho okuyindawo ephambili kunazo zonke yezindawo zokuthuthukisa umnotho eChina. Inzuzo yokwakheka komhlaba isenza ukuba sithole uchungechunge oluphelele lokuhlinzeka, izinsiza ezisekela ukuvuthwa kanye nenethiwekhi yethrafikhi ethuthukisiwe.
Ngolwazi oluningi oluqoqiwe, i-KELU iye yathuthukisa yaba yinkampani ehlanganisiwe ehlanganisa i-R & D, i-Prod, Sales kanye neNkonzo ndawonye. Singabahlinzeki abaqeqeshiwe bamabhizinisi ambalwa adumile ekhaya nakwamanye amazwe. Ilandela ifilosofi ethi "Ikhwalithi Yokuqala", i-KELU imema wonke amakhasimende amasha namadala emhlabeni wonke ukuthi athuthukise.
Yini i-KELU ekhethekile kuyo?
Ubuchwepheshe obuyinhloko i-KELU abanabo yi-Metal Injection Molding (MIM) ne-CNC Machining.
Sinikeza ngezinto ezahlukahlukene zensimbi ezisetshenziselwa izimboni eziningi kufaka phakathi amadivaysi Ezokwelapha, Imishini, Okokusebenza Kwemidlalo, I-elekthronikhi, iphrojekthi yezempi, ubucwebe neminye imikhakha ephezulu.
I-Metal injection wokubumba (i-MIM) ubuchwepheshe obuguqukayo ohlanganisa ukubumbana kwePulasitiki Injection, isayensi yamakhemikhali wePolymer, i-Powder metallur ne-Metallic materials science. Kuyinqubo yokwenza izinsimbi lapho insimbi enempuphu ecolekile ixutshwa nenani elilinganisiwe lezinto ezihlanganisiwe zokwenza "okuphakelayo" bese kubunjwe isikhunta. Imikhiqizo yokugcina izovela ukuphuma ngemuva kwezikweletu, imisebenzi yokona.
I-MIM ingakhiqiza ingxenye lapho kunzima, noma kungenakwenzeka khona, ukwenza kahle into futhi ibone ukunemba okuphezulu, nobukhulu obuphakeme, ukuxakaxeka kanye nevolumu yezingxenye ezinobukhulu obukhulu.
Ukulawulwa kwamanani wekhompyutha (i-CNC) kungukushintshwa kwamathuluzi womshini ngamakhompyutha enza ukulandelana okungakahlelwa okuhleliwe kwemiyalo yokulawula umshini.